Uru nke okike nke oke ifufe na-eweta | Netwọk Mgbasa Ozi
Uru nke okike nke ajọ ifufe na-eweta
Claudi ego | | Ajọ Ifufe, Meteorology
Dịka anyị ga-abụ mmadụ, yana maka ọha mmadụ, enwere ike ịsị na anyị enweghị ike ịchọta ọtụtụ elele na ajọ ifufe. Na mgbakwunye, ọ bụ nsogbu dị oke mkpa, ọkachasị maka ndị taa ahụhụ. Mana, na-elekwasị anya na mbara ụwa anyị, site na ihu igwe, nke bụ isiokwu anyị na-ekwu maka ya ebe a, ọ dịghị njọ.
O kwere omume na a priori, anyị na-anọgide na-amata ajọ ifufe na mbibi. Osisi dara, oke osimiri bibiri, anụmanụ ndị tara ahụhụ, wdg. Ọ bụghị ikwu ihe ọha mmadụ nwere nchegbu na. Ọnwụ mmadụ, ụlọ bibiri, ọkụ n'ihi ike ọkụ, ihe otiti ... Ma, site na ihu igwe meteorological, odi nma. Nwere ike ibu ụzọ mara ihe kpatara ya tupu ị gụwa akwụkwọ?
1 Nhazi usoro
2 Coral ndị ahụ
3 Uru ndị ọzọ
Nzọụkwụ nke oke ifufe na-atụnye ụtụ n'ime obi jụrụ ụwa. A ghaghị iburu otu isi ihe n'uche. Na mmiri na-ekpo ọkụ n’oké osimiri, oke ifufe ndị ka njọ na-adịkarị. Oké ifufe ahụ bụ Irma, bụ ngosipụta nke oke okpomọkụ niile anyị na-ahụ n'oge na-adịbeghị anya. N'aka nke ya, ajọ ifufe, na oke olu ya na ịdị ukwuu ya, na-ajụkarị oyi, ọ bụghịkwa na ọkwa mpaghara, mana nke a sụgharịrị ụwa niile. Ọ bụ otu n'ime ụzọ ụwa anyị a nwere dị ka usoro iji na-ahazi ọnọdụ okpomọkụ ya.
Ọ bụ ezie na ikuku ifufe bụ ihe a na-amụ, a maara ihe ole na ole gbasara ha. N'iburu n'uche na ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri na-emetụta, ọ na-asụgharịkwa na ikuku dị ọkụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị elu karị, obere ikuku dị, nke na-eme ka ọ na-ebili. Ime otú ahụ na-ebelata nrụgide ahụ, na-akpata enweghị nsogbu, na-eme ka a mmalite, ajọ ifufe n'okwu a. Kama nke ahụ, ọ ga-abụ anticyclone. Ikuku oyi na ikuku na-ekpo ọkụ anaghị agwakọta, ọ bụ ya mere o ji ebute mmiri ndị a, na ya mere ndị ọzọ phenomena ime na ekwueto. Na ikuku na-ekpo ọkụ nke ya na-ezute oyi na-abịa site na okporo osisi.
Coral ndị ahụ
Colares bụ nnukwu ndị na-erite uru n'oké ifufe. E wezụga ịbụ ụdị mmiri, coral kwere ka ọtụtụ nde ụdị dịrị ndụ. Ha na - ejikwa ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ eme ihe nkiri. Iji maa atụ, otu n’ime ha bụ algae, ndị amụrụ “enyemaka ibe ha” afọ 210 nde gara aga.
Nsogbu ndị coral metụtara na mgbanwe ihu igwe, dịka agbaze okporo osisi, ịrị elu okpomọkụ, wdg, bụ na ha na-etinye ndụ ha n'ihe egwu. N'elu okpomọkụ dị elu, coral na-enwekarị nrụgide, ya bụ, ha na-acha ọcha na agba. Ihe ngbanwe a na-aputa ihe n'ihi na edozighi ọnọdụ ndị dị mkpa iji lekọta zooxanthealle, coral na-achụpụkwa ya. Zooxanthealle bụ ihe nnọchianya nke usoro.
Mee elu mee ala, ọ bụrụ na ọnọdụ aga n'ihu na-akawanye njọ, ị nwere ike iru isi nke ọnwụ nke coral. Mgbe nke ahụ mere, ihe na-eme n’ezie bụ nke ahụ ihe omumu ihe ndi ozo nile na-efu, enweghi ike iweghachite. Ọ bụ ya mere, oke ifufe, na-ebelata okpomọkụ, na-achịkwa ọnọdụ maka ha ịdị ndụ. Nke a bụ otu oke ifufe ahụ na-arụ ọrụ "na-eme ka ọ dị ọhụrụ" n'okpuru mmiri, na-enyere aka ichekwa nnukwu ụdị ihe dị iche iche dị ndụ na ndozi.
Uru ndị ọzọ
Ọ bụghị naanị ndị ahụ a kpọtụrụ aha n’elu, ifufe eme ka mmeghari ohuru nke mmiri mmiri. Ọzọkwa, a na-ehichasị ebe ndị enwere mmiri na-enweghị mmiri na ikekwe ndị nwere ike iwe anwụnta.
Uzo ozo di iche nke ikuku siri ike na ewetara bu igbatu osisi. Ndị na-adịghị ike na-agba agba agba, si otú a na-akwado nke ahụ enwere ike ime ka ohia di ndu site na idebe osisi kacha ike. Dị ka ọ dị na mmiri mmiri, ọ na-abụkwa ihe nchịkwa iji zere ịba ụba nke ụdị ụfọdụ nke ụmụ ahụhụ.
Ọ na-atọ ọchị etu oge ụfọdụ, ihe na-enweghị nchịkwa na okike, ọ nwere ihe kpatara ịdị adị ya ma hapụ ihe nketa nke nguzozi. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka ajọ ifufe, ihe ga - eme na igwe akara bụ na ọ ga - ekpo ọkụ ruo oke oke. N'ebe ahụ ka anyị ga-emesị chọta a superstorm, na hypercan, nke anyị kwurula banyere ya n'oge na-adịbeghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Uru nke okike nke ajọ ifufe na-eweta
Hurricane Irma gbanwere agba nke Virgin Islands